GỤỌ NKE Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Angolan Sign Language Arabic Argentinean Sign Language Armenian Australian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Bassa (Cameroon) Bengali Bicol Bolivian Sign Language Boulou Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chuvash Cibemba Cinyanja Colombian Sign Language Croatian Cuban Sign Language Czech Czech Sign Language Dangme Danish Digor Douala Dutch Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Ewe Fijian Filipino Sign Language Finnish Finnish Sign Language Fon French French Sign Language Ga Georgian German German Sign Language Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Hungarian Sign Language Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Indonesian Sign Language Isoko Italian Italian Sign Language Japanese Japanese Sign Language Jula Kabiye Kannada Kikamba Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Korean Sign Language Kurdish Kurmanji Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Lamba Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Mambwe-Lungu Marathi Maya Mbunda Mexican Sign Language Mingrelian Mongolian Moore Motu Myanmar Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Nigerian Pidgin Norwegian Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Curaçao) Paraguayan Sign Language Persian Peruvian Sign Language Pidgin (Cameroon) Polish Polish Sign Language Portuguese Portuguese Sign Language Punjabi Quebec Sign Language Quechua (Bolivia) Romanian Romanian Sign Language Russian Russian Sign Language Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Setswana Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Urhobo Uzbek Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Waray-Waray Welsh Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zimbabwe Sign Language Zulu
“Na-echetanụ ndị na-edu ndú n’etiti unu.”—HIB. 13:7.
ABỤ: 125, 43
Ma n’oge ndịozi Jizọs ma n’oge anyị a, olee otú ndị Chineke si n’aka ha na-edu ndị ya si gosi na . . .
mmụọ nsọ nyere ha ike?
ndị mmụọ ozi nyeere ha aka?
Okwu Chineke duziri ha?
1, 2. Mgbe Jizọs laghachiri eluigwe, gịnị ka ndịozi ya nwere ike ịna-eche?
CHEGODỊ banyere mgbe ndịozi Jizọs guzo n’Ugwu Oliv, na-ele anya n’eluigwe. Ọ dịbeghị anya ha hụrụ ka e buliri Jizọs, bụ́ nna ha ukwu na enyi ha, ígwé ojii ekpuchie ya ka ha ghara ịhụkwa ya. (Ọrụ 1:9, 10) Ruo ihe dị ka afọ abụọ, Jizọs nọ na-akụziri ha ihe, na-agba ha ume, na-edukwa ha. Ugbu a, ọ hapụla ha. Gịnị ka ha ga-eme?
2 Tupu Jizọs alaghachi eluigwe, ọ gwara ndị na-eso ụzọ ya, sị: “Unu ga-abụkwa ndị àmà m ma na Jeruselem ma na Judia dum nakwa na Sameria, ruokwa n’ebe kasị anya n’ụwa.” (Ọrụ 1:8) Olee otú ha ga-esi rụọ ọrụ ahụ? N’eziokwu, Jizọs mesiri ha obi ike na mmụọ nsọ ga-enyere ha aka. (Ọrụ 1:5) Ma, ọ bụrụ na ha ga-ekwusa ozi ọma ahụ n’ụwa niile, e kwesịrị ịna-eduzi ha ma na-ahazi ha. N’oge ochie, Jehova ji ndị mmadụ na-edu ndị ya ma na-ahazi ha. N’ihi ya, ndịozi Jizọs nwere ike ịna-eche, sị: ‘Jehova ọ̀ ga-ahọpụta onye ndú ọhụrụ?’
3. (a) Mgbe Jizọs laghachiri eluigwe, olee ihe dị mkpa ndịozi ya kwesịrị ntụkwasị obi mere? (b) Gịnị ka anyị ga-atụle n’isiokwu a?
3 Mgbe ihe na-erughị izu abụọ gachara, ndị na-eso ụzọ Jizọs gụrụ Akwụkwọ Nsọ, rịọ Chineke ka o duzie ha. Ha họọrọ Matayas ka ọ nọchie Judas Iskarịọt ma bụrụ onye nke iri na abụọ ná ndịozi Jizọs. (Ọrụ 1:15-26) Gịnị mere ịhọpụta Matayas ji dị ma hanwa ma Jehova ezigbo mkpa? Ọ bụ n’ihi na ndịozi Jizọs ghọtara na ha kwesịrị ịdị mmadụ iri na abụọ. * Jizọs ahọrọghị ndịozi ya naanị ka ha na ya na-eje ozi ọma, kama ka ha na-arụ ọrụ dị mkpa n’ọgbakọ Ndị Kraịst. Gịnị bụ ọrụ ahụ? Olee otú Jehova si si n’aka Jizọs nyere ha aka ịrụ ya? Olee ọrụ yiri ya a na-arụ ná nzukọ Chineke taa? Oleekwa otú anyị ga-esi ‘na-echeta ndị na-edu ndú n’etiti anyị,’ nke ka nke, ndị so ‘n’ohu ahụ kwesịrị ntụkwasị obi, onye nwekwara uche’?—Hib. 13:7; Mat. 24:45.
JIZỌS NA-EDUZI ÒTÙ NA-ACHỊ ISI
4. Olee ọrụ ndịozi na ndị okenye ndị ọzọ nọ na Jeruselem rụrụ n’oge ndịozi Jizọs?
4 Na Pentikọst afọ 33, ndịozi Jizọs malitere iduzi ọgbakọ Ndị Kraịst. N’ụbọchị ahụ, “Pita biliri ọtọ, ya na ndịozi iri na otu ahụ,” ma zie ìgwè mmadụ ozi na-enye ndụ, ma ndị Juu ma ndị ha tọghatara atọghata. (Ọrụ 2:14, 15) Ọtụtụ n’ime ha ghọrọ Ndị Kraịst. Mgbe e mechara, ndị ahụ chegharịrị ọhụrụ “nọkwa na-ege ntị n’ozizi ndịozi.” (Ọrụ 2:42) Ọ bụ ndịozi Jizọs na-ekwu ihe a ga-eji ego ọgbakọ mee. (Ọrụ 4:34, 35) Ha na-akụziri ndị Chineke ihe, na-ekpekwa ekpere maka ha. Ha kwuru, sị: “Anyị ga-anọgidesi ike n’ikpe ekpere, na-ejekwa ozi banyere okwu Chineke.” (Ọrụ 6:4) Ha họpụtara ụmụnna ma nke a na-akọ ka ha gaa kwusawa ozi ọma n’ebe a na-ekwusatụbeghị ya. (Ọrụ 8:14, 15) Ka oge na-aga, ndị okenye ndị ọzọ e tere mmanụ so ndịozi bụrụ òtù na-achị isi na-eduzi ọgbakọ dị iche iche.—Ọrụ 15:2.
5, 6. (a) Olee otú mmụọ nsọ si nye òtù na-achị isi ike? (Lee ihe e sere ná mmalite isiokwu a.) (b) Olee otú ndị mmụọ ozi si nyere òtù na-achị isi aka? (ch) Olee otú Okwu Chineke si duzie òtù na-achị isi?
5 N’oge ndịozi Jizọs, Ndị Kraịst ghọtara na ọ bụ Jehova Chineke si n’aka Onye Ndú ha, bụ́ Jizọs, na-eduzi òtù na-achị isi. Gịnị mere obi ji sie ha ike? Nke mbụ bụ na mmụọ nsọ nyere òtù na-achị isi ike. (Jọn 16:13) Chineke wụkwasịrị Ndị Kraịst niile e tere mmanụ mmụọ nsọ, ma o mere ka ndịozi na ndị okenye ndị ọzọ nọ na Jeruselem na-elekọta ọgbakọ, nke bụ́ ọrụ Chineke nyere ha. Dị ka ihe atụ, n’afọ 49, mmụọ nsọ nyeere òtù na-achị isi aka ikpebi ihe gbasara ibi úgwù. Ọgbakọ niile mere ihe ha kwuru. E sikwa otú ahụ ‘na-eme ka ọgbakọ dị iche iche dị ike n’okwukwe, ha na-amụbakwa n’ọnụ ọgụgụ site n’ụbọchị ruo n’ụbọchị.’ (Ọrụ 16:4, 5) Akwụkwọ ozi ahụ òtù na-achị isi dere gosikwara na ha nwere àgwà ndị so ná mkpụrụ nke mmụọ nsọ, dị ka ịhụnanya na okwukwe.—Ọrụ 15:11, 25-29; Gal. 5:22, 23.
6 Nke abụọ bụ na ndị mmụọ ozi nyeere òtù na-achị isi aka. Tupu Kọnịliọs abụrụ onye Jentaịl mbụ a na-ebighị úgwù e mere baptizim, mmụọ ozi gwara ya ka o zie ozi ka a kpọọ Pita onyeozi. Mgbe Pita zichara Kọnịliọs na ndị ikwu ya ozi ọma, Chineke wụkwasịrị ha mmụọ nsọ n’agbanyeghị na e bighị ha úgwù. Ihe a mere ka ndịozi na ụmụnna ndị ọzọ mee ihe bụ́ uche Chineke ma nabata ndị Jentaịl a na-ebighị úgwù n’ọgbakọ Ndị Kraịst. (Ọrụ 11:13-18) Ndị mmụọ ozi nyekwara aka ka ozi ọma ahụ òtù na-achị isi na-ahazi ruo ọtụtụ ebe. (Ọrụ 5:19, 20) Nke atọ bụ na Okwu Chineke duziri òtù na-achị isi. Akwụkwọ Nsọ duziri ndị okenye ndị ahụ e tere mmanụ, ma mgbe ha na-ekpebi ihe gbasara ozizi ma mgbe ha na-ekwu ihe a ga-eme n’ọgbakọ.—Ọrụ 1:20-22; 15:15-20.
7. Gịnị mere anyị nwere ike iji kwuo na ọ bụ Jizọs bụ Onye Ndú ọgbakọ Ndị Kraịst oge mbụ?
7 N’agbanyeghị na òtù na-achị isi na-ekwu ihe a ga-eme n’ọgbakọ Ndị Kraịst oge mbụ, ha ghọtara na ọ bụ Jizọs bụ Onye Ndú ha. Pọl onyeozi kwuru na Kraịst “nyere ụfọdụ ka ha bụrụ ndịozi.” Ọ sịkwara: “Ka anyị site n’ịhụnanya tolite n’ihe niile n’ime onye ahụ bụ́ isi, ya bụ, Kraịst.” (Efe. 4:11, 15) Kama ịzawa aha otu n’ime ndịozi a ma ama, e si “ná nduzi Chineke gụọ ndị na-eso ụzọ Jizọs aha bụ́ Ndị Kraịst.” (Ọrụ 11:26) N’eziokwu, Pọl kwuru na ha kwesịrị ‘ijidesi omenala e nyefere ha n’aka ike,’ ya bụ, ihe ndị si n’Akwụkwọ Nsọ ndịozi na ndị okenye ndị ọzọ kụziiri ha. Ma, o kwukwara, sị: “Ma achọrọ m ka unu mara na Kraịst bụ isi nke nwoke ọ bụla; nwoke bụkwa isi nke nwaanyị; Chineke bụkwa isi nke Kraịst.” (1 Kọr. 11:2, 3) O doro anya na Jehova họpụtara Ọkpara ya bụ́ Jizọs Kraịst ka ọ na-edu ọgbakọ ya.
“IHE A ABỤGHỊ ỌRỤ MMADỤ”
8, 9. Malite n’afọ 1870, olee ọrụ dị mkpa Nwanna Russell nọ na-arụ?
8 Malite n’afọ 1870, Nwanna Russell na ụfọdụ ndị enyi ya gbalịsiri ike ifewe Chineke otú Ndị Kraịst oge mbụ si fee ya. Iji nyere ha aka ịna-akụzi eziokwu n’asụsụ dị iche iche, ha hiwere ụlọ ọrụ iwu kwadoro a na-akpọ Zion’s Watch Tower Tract Society n’afọ 1884, Nwanna Russell abụrụ onyeisi oche ya. * Ọ mụrụ Baịbụl nke ọma. Ọ tụghị ụjọ ịgba ozizi ụgha n’anwụ, ya bụ, ozizi ndị dị ka Atọ n’Ime Otu na mkpụrụ obi anaghị anwụ anwụ. Ọ ghọtara na a gaghị ahụ Jizọs anya mgbe ọ ga-abịa ọzọ nakwa na “oge a kara aka nke ndị mba ọzọ” ga-agwụ n’afọ 1914. (Luk 21:24) Nwanna Russell ji oge ya, ike ya, na ego ya na-akọrọ ndị ọzọ eziokwu ndị a. O doro anya na n’oge ahụ dị mkpa, Jehova na onyeisi ọgbakọ Ndị Kraịst ji Nwanna Russell na-arụ ọrụ.
9 Nwanna Russell achọghị ka ndị mmadụ towe ya. N’afọ 1896, o dere, sị: “Anyị achọghị otuto ma ọ bụ nsọpụrụ n’ihi ihe anyị na-ede; anyị achọghị ka a na-akpọ anyị Revren ma ọ bụ Rabaị. Anyị achọghịkwa ka a na-akpọ onye ọ bụla aha anyị.” O mechara kwuo, sị: “Ihe a abụghị ọrụ mmadụ.”
10. (a) Olee mgbe Jizọs họpụtara “ohu ahụ kwesịrị ntụkwasị obi”? (b) Kọwaa otú o si doo anya na Òtù Na-achị Isi dị iche na Watch Tower Society.
10 N’afọ 1919, afọ atọ mgbe Nwanna Russell nwụchara, Jizọs họpụtara “ohu ahụ kwesịrị ntụkwasị obi.” Gịnị mere o ji họpụta ya? Ọ bụ ka ọ na-enye ezinụlọ ya ‘nri n’oge kwesịrị ekwesị.’ (Mat. 24:45) N’oge ahụ, ọ bụ mmadụ ole na ole n’ime ụmụnna e tere mmanụ na-ewepụta ihe a na-akụziri ndị na-eso ụzọ Jizọs. Ụmụnna ndị ahụ na-eje ozi n’isi ụlọ ọrụ anyị dị na Bruklin, Niu Yọk. Okwu ahụ bụ́ “òtù na-achị isi” malitere ịgba n’akwụkwọ anyị mgbe afọ 1940 gachara. N’oge ahụ, e chere na e nweghị ihe dị iche n’òtù na-achị isi na Watch Tower Bible and Tract Society. Ma, n’afọ 1971, e mere ka o doo anya na Òtù Na-achị Isi dị iche na Watch Tower Society, nke bụ́ ụlọ ọrụ e hiwere n’ihi ihe iwu kwuru, ọ bụghị n’ihi ihe Akwụkwọ Nsọ kwuru. Kemgbe ahụ, ndị so n’Òtù Na-achị Isi bụzi ụmụnna e tere mmanụ, ndị na-esoghị ná ndị na-eduzi Watch Tower Society. N’afọ ndị na-adịbeghị anya, ọ bụ ụmụnna ndị ma nke a na-akọ, bụ́ ndị so ‘n’atụrụ ọzọ,’ na-eduzi Watch Tower Society na ụlọ ọrụ ndị ọzọ Ndịàmà Jehova ji arụ ọrụ. Ihe a mere ka Òtù Na-achị Isi nwee ike ilekwasị anya n’ịkụziri anyị Okwu Chineke na iduzi anyị. (Jọn 10:16; Ọrụ 6:4) Ụlọ Nche Julaị 15 afọ 2013 kwuru na “ohu ahụ kwesịrị ntụkwasị obi” bụ mmadụ ole na ole n’ime ụmụnna nwoke e tere mmanụ. Ọ bụ ha bụ Òtù Na-achị Isi.
Ihe a bụ òtù na-achị isi n’agbata afọ 1951 na 1959
11. Olee otú Òtù Na-achị Isi si arụ ọrụ ha?
11 Ụmụnna ndị so n’Òtù Na-achị Isi na-ezukọ ekpebi ihe ndị dị mkpa a ga-eme. Olee otú ha si eme ya? Ha na-ezukọ kwa izu, nke na-enyere ha aka ịna-ekwurịta okwu na ịna-adị n’otu. (Ilu 20:18) Kwa afọ, ha na-agbanwe onyeisi oche ná nnọkọ ndị ha na-enwe n’ihi na o nweghị onye ka ibe ya n’ime ndị so n’Òtù Na-achị Isi. (1 Pita 5:1) Otú ahụkwa ka a na-agbanwe onye ga-abụ onyeisi oche na kọmitii isii ndị e nwere n’Òtù Na-achị Isi. Onye ọ bụla so n’Òtù Na-achị Isi anaghị ewere onwe ya ka onye ndú ụmụnna ya, kama ọ na-ewere onwe ya ka onye so ‘n’ezinụlọ’ Kraịst. Onye ọ bụla n’ime ha sokwa ná ndị “ohu ahụ kwesịrị ntụkwasị obi” na-akụziri Okwu Chineke, na-emekwa ihe ha kwuru.
Kemgbe Jizọs họpụtara ohu ahụ kwesịrị ntụkwasị obi n’afọ 1919, ha na-ewepụta ihe a na-akụziri ndị Chineke (A ga-akọwa ya na paragraf nke 10 na nke 11)
12. Ebe ọ bụ na Òtù Na-achị Isi asịghị na mmụọ nsọ na-agwa ha okwu ma ọ bụ na ha zuru okè, olee ajụjụ ndị anyị ga-aza?
12 Òtù Na-achị Isi asịghị na mmụọ nsọ na-agwa ha okwu ma ọ bụ na ha zuru okè. N’ihi ya, ha nwere ike imejọ n’ihe gbasara ịkụzi Baịbụl ma ọ bụ iduzi nzukọ Chineke. Dị ka ihe atụ, n’Akwụkwọ Ndịàmà Jehova Ji Eme Nchọnchọ, e dere isiokwu bụ́ “Ime Ka Ihe Anyị Kweere Dokwuo Anya.” Ọ bụ ebe e depụtara ihe ndị a gbanwere n’otú anyị si ghọta ihe ụfọdụ e kwuru na Baịbụl. Jizọs agwaghị anyị na ohu ya kwesịrị ntụkwasị obi agaghị emejọ n’ihe gbasara ịkụzi Okwu Chineke. N’ihi ya, olee otú anyị ga-esi zaa ajụjụ ahụ Jizọs jụrụ, nke bụ́: “Ònye n’ezie bụ ohu ahụ kwesịrị ntụkwasị obi, onye nwekwara uche?” (Mat. 24:45) Olee ihe gosiri na Òtù Na-achị Isi bụ ohu ahụ kwesịrị ntụkwasị obi? Ka anyị leba anya n’ihe atọ ahụ nyeere òtù na-achị isi aka n’oge ndịozi Jizọs.
13. Olee otú mmụọ nsọ sirila nyere Òtù Na-achị Isi aka?
13 Ihe na-egosi na mmụọ nsọ na-enyere Òtù Na-achị Isi aka. Mmụọ nsọ enyerela Òtù Na-achị Isi aka ịghọta eziokwu Baịbụl ndị a na-aghọtaghị n’oge gara aga. Dị ka ihe atụ, chegodị banyere ihe ndị anyị kweere e mere ka ha dokwuo anya e kwuburu na paragraf bu nke a ụzọ. O doro anya na ọ bụghị mmadụ ka otuto ga-agara maka ịchọpụta “ihe ndị miri emi nke Chineke” na ịkọwa ha. (Gụọ 1 Ndị Kọrịnt 2:10.) Obi dị Òtù Na-achị Isi otú ọ dị Pọl onyeozi, bụ́ onye dere, sị: “Ihe ndị a ka anyị na-ekwukwa, anyị ejighị okwu e ji amamihe mmadụ kụzie na-ekwu ya, kama anyị ji okwu e ji mmụọ nsọ kụzie na-ekwu ya.” (1 Kọr. 2:13) Mgbe okpukpe ụgha kụzirila ozizi ụgha ruo ọtụtụ narị afọ, gịnị mere ezigbo Ndị Kraịst ji na-aghọtakwu eziokwu Baịbụl kemgbe afọ 1919? Naanị ihe kpatara ya bụ na Chineke ji mmụọ nsọ ya na-enyere Òtù Na-achị Isi aka.
14. Dị ka e kwuru ná Mkpughe 14:6, 7, olee otú ndị mmụọ ozi si na-enyere ndị Chineke aka taa?
14 Ihe na-egosi na ndị mmụọ ozi na-enyere Òtù Na-achị Isi aka. Nnukwu ọrụ Òtù Na-achị Isi na-arụ bụ ịhazi otú ihe karịrị nde ndị nkwusa asatọ ga-esi na-ekwusa ozi ọma ná mba niile. Gịnị mere ọrụ ahụ ji na-aga nke ọma? Ihe so kpata ya bụ na ndị mmụọ ozi na-enye aka. (Gụọ Mkpughe 14:6, 7.) E nweela ọtụtụ mgbe ndị nkwusa gara zie ndị mmadụ ozi ọma bụ́ ndị ka kpepụrụ ekpere ka Chineke nyere ha aka. * Otú ozi ọma ahụ si na-aga n’ihu n’agbanyeghị na a na-emegide ndị na-ekwusa ya n’obodo ụfọdụ gosiri na ndị mmụọ ozi na-enyere ha aka.
15. Olee otú Òtù Na-achị Isi si dị iche ná ndị ndú Krisendọm? Nye ihe atụ.
15 Okwu Chineke na-eduzi Otú Na-achị Isi. (Gụọ Jọn 17:17.) Chegodị ihe mere n’afọ 1973. N’afọ ahụ, Ụlọ Nche Bekee June 1 (nke gbara na nke Igbo na July 1, 1974) jụrụ ma ndị na-akwụsịbeghị ịṅụ sịga hà ruru eru ime baptizim. Ọ zara na ihe Baịbụl kwuru gosiri na ha erughị eru. Ụlọ Nche ahụ depụtara ụfọdụ amaokwu Baịbụl ma kọwaa ihe mere e ji kwesị ịchụpụ onye na-ekweghị akwụsị ịṅụ sịga n’ọgbakọ. (1 Kọr. 5:7; 2 Kọr. 7:1) O kwuru na iwu a esighị n’aka ụmụ mmadụ, kama na o si n’aka Chineke, bụ́ onye si n’Okwu ya bụ́ Baịbụl kwuo ihe bụ́ uche ya. È nwere okpukpe ọzọ na-eji Okwu Chineke ekpebi ihe niile ha na-eme, ọ bụrụgodị na ime otú ahụ nwere ike ime ka ihe siere ụfọdụ ndị òtù ha ike? Otu akwụkwọ e biri n’oge na-adịbeghị anya nke kwuru gbasara okpukpe ndị dị n’Amerịka kwuru, sị: “Ndị isi chọọchị na-agbanwe ozizi ha mgbe niile ka ọ daba n’ihe ọtụtụ ndị òtù ha na ọtụtụ ndị ọzọ n’ụwa kweere nakwa ihe ha chere.” Ebe ọ bụ na Òtù Na-achị Isi na-eji Okwu Chineke ekpebi ihe ha na-eme kama iji ihe ọtụtụ ndị n’ụwa chere, ònye ka a ga-asị na-eduzi ndị Chineke taa?
‘NA-ECHETA NDỊ NA-EDU NDÚ’
16. Olee otu ụzọ anyị nwere ike isi na-echeta Òtù Na-achị Isi?
16 Gụọ Ndị Hibru 13:7. Baịbụl kwuru ka anyị ‘na-echeta ndị na-edu ndú.’ Otu ụzọ anyị nwere ike isi na-eme ya bụ ịna-echeta Òtù Na-achị Isi n’ekpere. (Efe. 6:18) Chegodị banyere ọrụ ndị ha na-arụ ịkụziri anyị Okwu Chineke, ịhazi ozi ọma a na-ekwusa n’ebe dị iche iche n’ụwa na ịhụ maka onyinye ndị mmadụ na-enye. N’eziokwu, anyị kwesịrị ịna-echeta ha n’ekpere mgbe niile.
17, 18. (a) Olee otú anyị si akwado Òtù Na-achị Isi? (b) Olee otú ozi ọma anyị na-ekwusa si egosi na anyị na-akwado Jizọs na ohu ahụ kwesịrị ntụkwasị obi?
17 N’eziokwu, icheta Òtù Na-achị Isi abụghị naanị n’ọnụ, kama anyị kwesịkwara ịna-eme ihe ha gwara anyị. Ha na-esi n’akwụkwọ ndị ha na-ebipụtara anyị, ọmụmụ ihe, na mgbakọ agwa anyị ihe anyị ga-eme. Ha na-ahọpụtakwa ndị nlekọta sekit. Ndị nlekọta sekit ahọpụta ndị okenye ọgbakọ. Otú ndị nlekọta sekit na ndị okenye si echeta Òtù Na-achị Isi bụ ịna-eme ihe a gwara ha. Ọ bụrụ na anyị niile na-erubere ndị Onye Ndú anyị bụ́ Jizọs ji arụ ọrụ isi, ọ ga-egosi na anyị na-akwanyere ya ùgwù.—Hib. 13:17.
18 Otú ọzọ anyị si echeta Òtù Na-achị Isi bụ ịna-ekwusasi ozi ọma ike. A sị ka e kwuwe, Pọl onyeozi gwara Ndị Kraịst ka ha ṅomie okwukwe ndị na-edu ndú n’etiti ha. Otú ohu ahụ kwesịrị ntụkwasị obi si jiri ịnụ ọkụ n’obi na-ekwusa ozi ọma ma na-akwado ya gosiri na okwukwe ha siri ike. Ì so n’atụrụ ọzọ na-akwado ndị e tere mmanụ n’ọrụ a dị mkpa? Obi ga-adị gị ezigbo ụtọ mgbe Onye Ndú anyị bụ́ Jizọs ga-asị gị: “Ihe niile unu meere otu n’ime ndị kasị nta n’ime ụmụnna m ndị a, ọ bụ m ka unu meere ya.”—Mat. 25:34-40.
19. Gịnị mere i ji kpebisie ike ịna-eso Onye Ndú anyị bụ́ Jizọs?
19 Mgbe Jizọs laghachiri eluigwe, ọ hapụghị ndị na-eso ụzọ ya. (Mat. 28:20) Ọ ma na mmụọ nsọ, ndị mmụọ ozi, na Okwu Chineke nyeere ya aka mgbe ọ na-eje ozi ya n’ụwa. O jikwa ihe ndị ahụ enyere ohu ahụ kwesịrị ntụkwasị obi aka taa. Ndị so n’ohu ahụ e tere mmanụ “na-eso Nwa Atụrụ ahụ n’agbanyeghị ebe ọ na-eje.” (Mkpu. 14:4) N’ihi ya, ọ bụrụ na anyị ana-eme ihe ha na-agwa anyị, ọ pụtara na anyị na-eso Onye Ndú anyị bụ́ Jizọs. N’oge na-adịghị anya, ọ ga-eme ka anyị nweta ndụ ebighị ebi. (Mkpu. 7:14-17) E nweghị onye ndú bụ́ mmadụ ga-ekwe ụdị nkwa ahụ.
^ para. 3 Ọ dị ka Jehova ọ̀ chọrọ ka e jiri ndịozi iri na abụọ ahụ mere ‘nkume iri na abụọ e ji tọọ ntọala’ Jeruselem Ọhụrụ. (Mkpu. 21:14) Ọ bụ ya mere na e kwesịghị idochi onyeozi ọ bụla kwesịrị ntụkwasị obi nke jechara ozi ya n’ụwa.
^ para. 8 Kemgbe afọ 1955, ihe e jizi mara ụlọ ọrụ ahụ bụ Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania.
^ para. 14 Gụọ akwụkwọ bụ́ ‘Ịgba Àmà nke Ọma Banyere Alaeze Chineke,’ peeji nke 58-59.